power-ထောက်ပံ့ရေးလက်ခဏာ - တရုတ် BST (ဟောင်ကောင်) စက်မှု
display ကို Power Supply
PFC ကို Quad Output
PFC လူပျို Output
DC က / DC က
ပါဝါထောက်ပံ့ရေး IRS ကို-450w သို့ပြောင်းပါ 450W လူပျို Output
ပါဝါထောက်ပံ့ရေး ITQ-125W သို့ပြောင်းပါ 125W ကို Quad Output
ပါဝါထောက်ပံ့ရေး IRD-75W သို့ပြောင်းပါ 75W Dual-Output
ပါဝါထောက်ပံ့ရေး ITT-50W သို့ပြောင်းပါ 50W Triple Output
လွင့်မျောနေသော: စဉ်ဆက်မပြတ်လိုင်းဗို့အား, ဝန်နှင့်အပူချိန်မှာအချိန်တစ် function ကိုအဖြစ် DC output ကိုဗို့အားရှိမူကွဲ။
dynamic တုံ့ပြန်မှု: တစ်ဦးက power supply ဝန်အာဏာကိုတစ်ဦးပြောင်းလဲမှုမြန်ဆန်စွာပြောင်းလဲနေသောတုံ့ပြန်မှုများကိုတစ်ဦးလိုအပ်ချက်ရှိမှုစနစ်အတွက်အလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအာဏာစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်အတူ High-Speed ကိုမိုက်ခရို၏ဝန်များအတွက်အမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, မိုက်ခရိုတစ်ဦး standby ပြည်နယ်အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့် command ကိုအပေါ်သို့က power supply အပေါ်အစာရှောင်ခြင်းချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်နှုန်းထားများနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ပြောင်းလဲနေသောရေစီးကြောင်းချမှတ်ထားတဲ့သောကို start up သို့မဟုတ်ချက်ချင်းပိတ်လိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါမိုက်ခရိုလိုက်လျောညီထွေရန်, ထောက်ပံ့ရေးရဲ့ output ကိုဗို့အားတစ်ဦးသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကြားကာလအတွင်း, ဒါပေမယ့်အလွန်အကျွံ overshoot မပါဘဲချင့်တချက်သို့မဟုတ်ရပါမည်။
ထိရောက်မှု: အမည်ခံလိုင်းအခြေအနေများ (Pout / Pin) နဲ့ပေးထားသောဝန်လက်ရှိမှာတိုင်းတာ (ရာခိုင်နှုန်း) ကို output-to-input ကိုအာဏာအချိုး။
Holdup အချိန်: တစ် power supply ရဲ့ output ကိုဗို့အား input ကိုအာဏာဆုံးရှုံးမှုအောက်ပါသတ်မှတ်ချက်အတွင်းကျန်ရှိနေဆဲအချိန်ထားတဲ့ကာလအတွင်း။
Inrush လက်ရှိ: အလှည့်-အပေါ်မှာ power supply များကရေးဆွဲ Peak ချက်ချင်း input ကိုကလက်ရှိ။
နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများ: တစ် power supply ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်အိုင်အိုဒင်း EMI (လျှပ်စစ်သံလိုက််ရောက်စွက်ဖက်) အဆင့်ဆင့်ကိုဖော်ပြပါ။
အထီးကျန်: Volts အတွက်တိုင်းတာမယ့် power supply ၏ input ကိုနှင့် output ကိုအကြားလျှပ်စစ်ခွဲခြာ။ တစ်ဦးက Non-အထီးကျန်သီးခြား power supply input ကိုနှင့် output ကိုအကြား DC လမ်းကြောင်းကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် Transformer လုပ်ကိုင်သော်လည်း, ထောက်ပံ့ရေး၏ input ကိုနှင့် output ကိုအကြားတစ်ဦး DC လမ်းကြောင်းကိုရှိပါတယ်။
လိုင်းစည်းမျဉ်း: အဆိုပါ± MV အတွက်အပြောင်းအလဲသို့မဟုတ်±% အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော AC input ကိုဗို့အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကနေရရှိလာတဲ့ DC output ကိုဗို့အား၏တန်ဖိုးပြောင်းလဲမှု။
ဝန်စည်းမျဉ်း: ± MV သို့မဟုတ်±% အတွက်အပြောင်းအလဲအဖြစ်မသတ်မှတ်အများဆုံး-rated output ကိုလက်ရှိမှ Open-circuit ကိုထံမှဝန်အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကနေရရှိလာတဲ့ DC output ကိုဗို့အား၏တန်ဖိုးပြောင်းလဲမှု။
output ဆူညံသံ: ဒီအမြင့်ဆုံးကြိမ်နှုန်းစွမ်းအင်တိုတောင်းပြီးတော့ Activision နေတာများ၏ပုံစံအတွက် power supply အတွက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ အဆိုပါဆူညံသံယင်း၏လည်ပတ်မှုသံသရာအတွင်းမှာပါဝါထောက်ပံ့ရေးအတွင်းအားသွင်းခြင်းနှင့်ကပ်ပါး capacitive ၏ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်အားဖြင့်ဖြစ်ပွားပါသည်။ ၎င်း၏လွှဲခွင် variable ကိုနှင့်ဝန် impedance ပြင်ပ filtering ကို, ဘယ်လိုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ်မူတည်နိုင်ပါတယ်။
output ဗို့လျ: Most power supplies have the ability to “trim” the output voltage, whose adjustment range does not need to be large, usually about ±10%. One common usage is to compensate for the dc distribution voltage drop within the system. Trimming can either be upward or downward from the nominal setting using an external resistor or potentiometer.
periodic နှင့်ကျပန်းသှဖေ (PARD): မလိုချင်တဲ့သည် Periodic (ဂယက်) သို့မဟုတ်ယင်း၏အမည်ခံတန်ဖိုးကိုထံမှအာဏာထောက်ပံ့ရေး output ကိုဗို့အား၏ aperiodic (ဆူညံသံ) သွေဖည်။ PARD တစ်သတ်မှတ်ထားသော bandwidth ကိုမှာ MV အထွတ်အထိပ်-to-အထွတ်အထိပ်သို့မဟုတ် RMS အများတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
peak လက်ရှိ: တစ် power supply အကျဉ်းကာလအဘို့အပေးနိုငျသောအများဆုံးလက်ရှိ။
peak power: တစ် power supply ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမပါဘဲထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကိုအဆိုပါအကြွင်းမဲ့အာဏာအများဆုံး output power ကို။ ဒါဟာကောင်းစွာစဉ်ဆက်မပြတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသော output power ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုထက် ကျော်လွန်. ပုံမှန်အားသည်နှင့်သာကွာခဏအသုံးပြုသင့်ပါသည်။
power-ထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်: ဆင့်ကဲအလှည့်-On နှင့်အာဏာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၏ချွတ်မျိုးစုံလည်ပတ်မှု voltages ကိုအတူစနစ်များအတွက်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အကြောင်း, voltages ကိုမဟုတ်ရင်စနစ်ပျက်စီးနိုင်ပါသည်, တိကျတဲ့ sequence ကိုအတွက်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပထမဦးဆုံးဗို့အားလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ကတိကျသောတန်ဖိုးတစ်ခုသို့ရောက်ရှိပြီးနောက်, တစ်စက္ကန့်ဗို့ဒါပေါ်တက်အပူတပြင်းနှင့်နိုင်ပါတယ်။ အာဏာကိုဖယ်ရှားသည့်အခါမြန်နှုန်းများသောအားဖြင့်အလှည့်-On အဖြစ်ပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်တာမဟုတ်ပေမယ့်အစီအစဉ်, ပြောင်းပြန်အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်။
ဝေးလံခေါင်ဖျား် / ပိတ်: ဒီအပေါ်နဲ့ off လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုကိုဖွင့်ဖို့ခလုတ်ကျော်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ power-ထောက်ပံ့ရေးဒေတာ-စာရွက်သတ်မှတ်ချက်များများသောအားဖြင့်အသေးစိတ် on / off ဝေးလံခေါင်သီများအတွက် DC parameters တွေကို, အပေါ်နှင့်လိုအပ်သောယုတ္တိဗေဒအဆင့်ဆင့်ပယ်စာရင်း။
ဝေးလံခေါင်ဖျားအသိ: ပုံမှန် power supply က၎င်း၏ output ကိုဗို့အားစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဗို့အားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုပြန်လည်ပေးဝေဖို့ကတစ်ဦးသောအဘို့ကိုကျွေးမွေး။ က output မြင့်တက်သို့မဟုတ်လဲလေ့လျှင်ဤနည်းသည်, တုံ့ပြန်ချက်အဆိုပါထောက်ပံ့ရေးရဲ့ output ကိုဗို့အားထိန်းညှိ။ သို့သော်ဝန်မှာစဉ်ဆက်မပြတ် output ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, ပါဝါထောက်ပံ့ရေးအမှန်တကယ်ဝန်မှာဗို့အားစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ဦး power supply ရဲ့ output ကို၎င်း၏ဝန်မှဆက်သွယ်မှုများကိုအဆိုပါထောက်ပံ့ရေးရဲ့ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အမှန်တကယ်ဝန်အကြားဗို့အားခြားနားချက်ဖန်တီးမယ့်ဗို့အားကျဆင်းထုတ်လုပ်ကြောင်းခုခံသူတို့ကိုရှောက်စီးဆင်းလက်ရှိရှိသည်။ အကောင်းဆုံးစည်းမျဉ်းများအတွက်, ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပြန်လည်တိုက်ကျွေးသည့်ဗို့အားအမှန်တကယ်ဝန်ဗို့ဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါပေးဝေမယ့်နှစ်ခု (အပေါင်းနှင့်အနုတ်) ဝေးလံသောအသိဆက်သွယ်မှုအမှန်တကယ်ဝန်ဗို့အားစောင့်ကြည့်နှစ်ခုဝေးလံခေါင်ဖျားအသိဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်လက်ရှိအလွန်နိမ့်သောကြောင့်အရာတစ်ဦးသောအဘို့ကိုပြီးရင်အနည်းငယ်သာဗို့အားကျဆင်းမှုနှင့်အတူပြန်လည်ပေးဝေဖို့တိုက်ကျွေးသည်။ အကျိုးဆက်အဖြစ်, ဝန်သက်ရောက်သောဗို့အားစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။
ဂယက်ထ: AC-DC နှင့်၎င်း၏ DC output ကိုအပေါ်စီးကြောင်းတစ်ခု ac အစိတ်အပိုင်း (ဂယက်) တွင်တစ်ဦး switching power supply ရဲ့ output ကိုရလဒ်များကို filtering ။ ဂယက်ထအကြိမ်ရေအတွက် converter ကို topology ပေါ်မူတည်သော converter ရဲ့ switching အကြိမ်ရေ, အချို့အတွက်အဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍမျိုးစုံဖြစ်ပါတယ်။ ဂယက်ထဝန်လက်ရှိအားဖြင့်အတော်လေးထိခိုက်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ပြင်ပက Capacitor filtering ကိုသဖြင့်ယုတ်လျော့စေနိုင်သည်။
ခြေရာခံ: တစ်ဦးချင်းစီတစ်ဘုံတန်ဖိုးလေးစားမှုနှင့်အတူသတ်မှတ်ထားသောခြေရာခံခြင်းသည်းခံစိတ်အတွင်း, တူညီတဲ့အချိုးကျ output ကိုဗို့အားကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်အောင်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအကျိုးရလဒ်များလိုင်း, ဝန်နှင့်အပူချိန်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူအခြားအတိုင်းလိုက်နာခွမျိုးစုံ output power ကိုထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအသုံးပြုတဲ့အခါ။
Post ကိုအချိန်: ဧပြီ-23-2018
ယူနစ် 406, Jinhui အဆောက်အအုံ, Chenjiang အလယျပိုငျးလမ်း, Zhongkai Hi-tech ဇုန်, Huizhou စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်။
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-0752-3220212
E-mail ကို: sales01@bst-elecs.com
E-mail ကို: sales02@bst-elecs.com